By vijayafm on	 June 6, 2019 फोटो फिचर, विविध खबर, स्थानीय
गैँडाकोट, २३ जेष्ठ । गैँडाकोट १३ मा युवाहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि उद्घोषण तालिम गरिएको छ । ध्रुवतारा युवा क्लबले आयोजना गरेको युवा लक्षित उद्घोषण तालिमबाट सहभागिहरुले व्यक्तित्व विकासमा परिवर्तन आएको बताएका छन् । गैँडाकोट नगरपालिका वाड नं. १३ को सहयोगमा आयोजित तीन दिने तालिमको समापन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि वडा अध्यक्ष पदमलाल पौडेलले सिकेका कुरालाई व्यवहारमा उतार्न आग्रह गर्नुभएको छ । वाक कलाले व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व विकास गराउने हुँदा यसले समाजमा सकरात्मक परिवर्तन खेल्ने वडा अध्यक्ष पौडेलले बताउनुभयो ।
कार्यक्रमका प्रमुख प्रशिक्षक विजय एफएम १०१.६ का स्टेशन म्यानेजर श्रीधर उपाध्यायले कुशल प्रस्तोता र कार्यक्रम सञ्चालकका लागि आत्मविश्वास, ज्ञान र निरन्तर अभ्यास आवश्यक हुने बताउनुभयो । तीन दिन सम्म चलेको तालिममा प्रमुख प्रशिक्षक उपाध्यायका साथमा विजय एफएमका जनसम्पर्क अधिकारी पनि प्रशिक्षकको भूमिकामा रहनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा टोल विकास संस्थाहरुको प्रतिनिधिको रुपमा कैलाश टोल विकास संस्थाका तर्फबाट प्रेमलाल पौडेल र समाजसेवी खुसीराम ढकालले शुभकामना मन्तव्य राख्नुभएको थियो । कार्यक्रममा गैँडाकोट नगरपालिका वाड नं. १३ की वडा सदस्य छविकला पाण्डेले सहभागिहरुलाई हौसला प्रदान गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा प्रशिक्षार्थीका तर्फबाट सौगात आचार्य, लक्ष्मी कंडेल र जीतबहादुर परियारले अनुभव बाँड्दै तालिमले व्यक्तित्व विकास भएको बताएका छन् । कार्यक्रमका सभापति ध्रुवतारा युवा क्लबका अध्यक्ष रनबहादुर थापाले गैँडाकोट १३ को समृद्धिका क्लबलाई आगामी दिनमा विभिन्न कार्यक्रमका साथ जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । तालिमले स्थानीय कार्यक्रमका लागि कुशल कार्यक्रम सञ्चालक उत्पादन गरेको विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो । कार्यक्रमको सहजीकरण संस्थाका सचिव ऋषिराम गौतमले गर्नुभएको थियो ।